၃၁ Spider-Man ကိုးကားချက်များ၊ Spider-Man သည်သင့်ကိုစဉ်းစားစေလိမ့်မည်။ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ပင့်ကူလူသားပုံပြင်ကို သင်သိပါသလား။ ရုပ်ပြနှင့် စူပါဟီးရိုးများကမ္ဘာကို သင်နှစ်သက်ပါက Spiderman ဟုလည်းလူသိများပါက ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်အကြောင်းကို သင်သိသည်ထက် ပိုများပါသည်။ ဇာတ်လမ်းကို မသိရင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ပင့်ကူကိုက်ခံရတဲ့ Peter Parker ဆိုတဲ့ ကောင်လေးအကြောင်း၊ သူ့တွင် Spiderman သို့မဟုတ် spider man အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည့် စူပါပါဝါများ ရှိလာသည်။
ဒီစူပါဟီးရိုးကို Stan Lee နဲ့ Steve Ditko တို့က ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Amazing Fantasy ရဲ့ နံပါတ် 1962 မှာ 15 မှာ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်သည် လူသားတို့၏ သွက်လက်မှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်အပြင် အန္တရာယ်မဖြစ်မီတွင် အန္တရာယ်ကို ရိပ်မိစေရန် ကူညီပေးသည့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ပင့်ကူအာရုံလည်းရှိသည်။ မလုံလောက်သကဲ့သို့၊ သူသည် ပြုတ်ကျခြင်းမရှိဘဲ ၎င်း၏ရန်သူများကို မလွတ်မြောက်စေဘဲ မိုးမျှော်တိုက်များအတွင်း ခုန်ဆင်းနိုင်ရန် ကူညီပေးသည့် ပိုခိုင်ခံ့သော ပင့်ကူမျှင်တစ်ခုလည်း ရှိနိုင်သည်။ ဝဘ်လွှင့်ပစ်သူကို တူညီသောဇာတ်ကောင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
Spider-Man သည် သူ၏ လူငယ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရင်း New York City ၏ လူဆိုးများကို ခုခံတိုက်ခိုက်နေပါသည်။ မိဘများကွယ်လွန်ပြီးနောက် ဦးလေးများနှင့်အတူ ကြီးပြင်းလာခဲ့သော်လည်း ဇာတ်လမ်းအစတွင် ဦးလေးသေဆုံးသွားခဲ့သည်။ သူသည် Spider-Man ဖြစ်သည်ကို မည်သူမှမသိဘဲ သတင်းစာထဲတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည်။
Spiderman ဟာ ဘယ်တော့မှ ပုံစံမရိုးသွားပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Marvel စကြဝဠာရုပ်ရှင်တွေမှာ သူကတော့ ကလေးတော်တော်များများရဲ့ ဟီးရိုးဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ ထို့နောက် ၎င်းတို့ကို ခံစားနိုင်စေရန်နှင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်သည့်အခါတွင် ၎င်းတို့ကို အမြန်ဖော်ထုတ်နိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ရုပ်ရှင်များမှ ထုတ်နုတ်ထားသော စကားစုအချို့ကို သင့်အား ချန်ထားခဲ့ပါမည်။
Mary Jane ရဲ့ အကောင်းဆုံးအရာကတော့ သူမရဲ့ မျက်လုံးတွေကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သူမဟာ သင့်မျက်လုံးထဲကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာ ပိုအားကောင်းပြီး ပျော့ညံ့တယ်လို့ ခံစားရတာကြောင့် အရာအားလုံးက ထူးဆန်းနေသလို ခံစားရပါတယ်။ သင် စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကြောက်လန့်နေပါသည်။ အမှန်က၊ မင်းဖြစ်ချင်တဲ့လူကလွဲရင် မင်းဘယ်လိုခံစားရလဲ မင်းမသိဘူး။ အဲဒါအတွက် ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲ သင်မလှမ်းမကမ်းကို ရောက်ရှိသွားသလိုပါပဲ။
ကြီးမားသော စွမ်းအားဖြင့် တာဝန်ကြီးလာသည်။ ဒါ ငါ့လက်ဆောင်၊ ငါ့ကျိန်စာပဲ။ ငါဘယ်သူလဲ? ငါက Spider-Man ပါ။
အဲဒါက ငါ့ပြဿနာမှန်း ငါမသိခဲ့ဘူး။
ငါ့ကို Parker ကောင်းကောင်းကြည့်၊ ရှည်ပြီး မာကြောတယ်။ ဤသည်မှာ Spider-Man နောက်ဆုံးမြင်ရမည့် မျက်နှာဖြစ်ပြီး Green Goblin ၏ စစ်မှန်သော မျက်နှာဖြစ်သည်။ Norman Osborn ၏ မျက်နှာ။
လွယ်ကူတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်သူမဆို စစ်ပွဲမှာ အနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေတွေ ခက်ခဲလာတဲ့အခါ အခွင့်အလမ်းတွေ မရှိဘူးလို့ ထင်ရတဲ့အခါ အဲဒါကို ထည့်တွက်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ပါယာစတိတ်တက္ကသိုလ်။ Spider-Man မွေးဖွားရာနေရာ။ အခု သူဘယ်မှာသေနိုင်မလဲ။ အထေ့အငေါ့။
ပြီးတော့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ဆံပင်ရှည်ပြဿနာတွေက အသက်ခြောက်ဆယ်ကျော်သွားပြီလို့ ထင်ခဲ့တယ်။
လူတွေဟာ ချိုမြိန်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ ခွန်အားတွေ ရနိုင်လောက်တဲ့ ဒုက္ခ၊ မင်းကို လူသားအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားဖို့ လုံလောက်တဲ့ နာကျင်မှု၊ ပျော်ရွှင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွန်ုပ်တို့မည်သူဖြစ်သည်ကိုဖြစ်စေကာ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှန်ကန်သောအရာကို လုပ်ဆောင်ရန် အမြဲတမ်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
သူတစ်ပါးအတွက် ကောင်းကျိုးတစ်ခုခုကို လုပ်နိုင်ရင် လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်။
ရှက်သင့်တယ်ကွ။ သူတို့သည် မြို့၏ ဂန္တဝင်အရှိဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုကို ခိုးယူရန်ကြိုးစားရုံသာမက ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်လည်း မခေါ်ခဲ့ကြပေ။
မမြင်ရတဲ့ ဂျက်လေယာဉ်ရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ သာမာန်အိမ်လေးဆီ ပြန်သွားပြီး ချစ်သူရဲ့အဖေနဲ့ ရန်ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒီလူတွေ၊ Pete၊ အဲဒီကလူတွေ၊ ချမ်းသာတဲ့သူတွေ၊ တန်ခိုးကြီးတဲ့သူတွေက သူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်တယ်။ ငါတို့လိုကောင်တွေ မင်းနဲ့ငါလိုပဲ ငါတို့ကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါတို့က သူတို့ရဲ့လမ်းတွေကို ဆောက်ပြီး သူတို့ရဲ့စစ်ပွဲတွေ အကုန်လုံးကို တိုက်နေပေမယ့် သူတို့က ငါတို့ကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ နောက်မှ ကောက်ရမှာပေါ့။ စားပွဲပေါ်မှ အမှိုက်များကို ငါတို့စားရမည်။ ဒါပါပဲ၊ ငါပြောနေတာ မင်းသိပါတယ် ပေတရု။
အဲဒါက သီးသန့်စကားဝိုင်းတစ်ခုပါ။ ဒီအကြောင်းကို ရယ်ရတာ မကြိုက်ဘူး။ အဲဒီအကြောင်း မင်းကို ပြောဖို့ ငါ ခက်တယ်။
ငါက သူ့ကို စွဲလမ်းနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါက အရမ်းသတိရှိတာ။
အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှုဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို လုံခြုံတဲ့နေရာဖြစ်အောင် ငါသွားရမယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုစာကြောင်းနှင့် မည်သည့် မူပိုင်ခွင့်ကိုမျှ ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
"Plan B" လို့ပြောရင် မုန်းတယ်။ "အရာရာကို မှုတ်ထုတ်ပါ" ဟုပြောရန် supervillain ကုဒ်ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ လုံခြုံရေးအခန်းမှာ ဒီမှာရှိနေတဲ့ ငါ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးနဲ့၊ ငါ့ Peter Parker ဘဝမှာ တစ်ကြိမ်လောက် ငါ 100% ပင့်ကူကင်းစင်တယ်။
Goblin၊ ငါ့စကားကို နားထောင်ပါ။ စကားပြောဖို့ လိုတယ်။ မင်းဖျားနေတယ် ငါမင်းကိုကူညီချင်တယ်။
ကြည့်ပါ၊ ခေတ်တွေပြောင်းနေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤနည်းပညာမြင့်လက်နက်များကို ရောင်းချသည့် တစ်ခုတည်းသောသူများဖြစ်သည်။
ကျွေးမွေးသူတွေက ငါတို့ကိုစောင့်နေတယ်။ အခုငါတို့ Iron Man ရဲ့ ရေဒါပေါ်ရောက်နေလား။ ဟုတ်တယ်၊ ငါပြေးနေတယ်။ မင်းလည်း လုပ်သင့်တယ်။
ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံလာပါစေ၊ ငါတို့ရင်ထဲမှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေပါစေ၊ ငါတို့မှာ ရွေးချယ်စရာတွေ အမြဲရှိတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Harry က ကျွန်တော့်ကို သင်ပေးတယ်။ အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက ငါတို့ကို ဘယ်သူဖြစ်စေချင်တာလဲ။ ပြီးတော့ မှန်ကန်တဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့ အမြဲတမ်းရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
မင်းဦးလေးဟာ ငါတို့နှလုံးသားထဲမှာ ဒဏ်ခတ်မှုတွေနဲ့ ငါတို့ကို တစ်စက္ကန့်လောက် အသက်ရှင်နေစေချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်တဲ့အခါ အဆိပ်တစ်ခုလိုပါပဲ၊ အဲဒါကို သတိမထားမိဘဲ မင်းကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်။
ဘုရားသခ! မင်းခေါင်းကို အုပ်ထားသလိုမျိုး မင်းမအံ့သြပါဘူး။ မင်းဘယ်သူလဲ ငါမသိဘူး ဒါပေမယ့် တစ်ခုခုတော့မှန်တယ်၊ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာ မင်းကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး၊
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုအတွက် ဂုဏ်ပြုဖို့ ကျွန်တော် လာရပ်လိုက်တယ်။ အခုထိ မင်းငါ့ကို 100% မှားနေပြီ။ ငါမင်းကိုပြောရမယ်၊ တစ်ချိန်လုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာငါသေချာတယ်။
ငါ့ဘဝကို စည်းစနစ်တကျ ထားချင်တိုင်း ကျောင်းနောက်ကျတာနဲ့ အမြဲလိုလို ကုန်ဆုံးနေရတာ ဘာကြောင့်လဲ။
လူတွေက ငါ့ကို အမြဲသတိပေးတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ သိရတာ ကောင်းပါတယ်။
ငါက ပင့်ကူပါ။ ငါသည် ည၏ ရန်ပွဲဖြစ်သည်။ ငါက မင်းရဲ့ အဆိုးဆုံး အိပ်မက်ဆိုးကြီး၊
ငါလုပ်သမျှကို မလုပ်နဲ့။ ပြီးတော့ ငါမလုပ်ဘူးတဲ့အရာကို သေချာမလုပ်နဲ့။ ထိုနေရာတွင် မီးခိုးရောင် ဧရိယာ အနည်းငယ်ရှိပြီး ၎င်းသည် လည်ပတ်နေသည့် နေရာဖြစ်သည်။
ငါ မင်းကို အကြံဉာဏ်ပေးလို့ ရမလား။ ဒီအလုပ်ရဲ့အပိုင်းမှာ တိုးတက်ရမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » ၃၁ Spider-Man ကိုးကားချက်များ၊ Spider-Man ကသင့်ကိုစဉ်းစားစေလိမ့်မည်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ စိတ်နေစိတ်ထားနှင့် စရိုက်လက္ခဏာတို့အကြား ကွဲပြားမှုများ